Faaqidaadda Toddobaadka, 01 January 2021
Khamiis 1 January 2021
Faaqidaadda: Muranka ka taagan doorashada Soomaaliya
Barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muranka siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya, xilli baarlamanka federaalka uu muddo xileedkii ka dhamaaday.
Faaqidaadda Toddobaadka: Muranka hareeyey doorashada Soomaaliya
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ka kooban laba qeybood, waxay qeybtan ku saabsan tahay xaaladihii ugu dambeeyay ee muranka muddada soo jiitamayay ee hareeray hanaanka qabashada doorashada Soomaaliya.
Faaqidaadda Toddobaadka: Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Geeska Afrika
Barnaamijkii Faaqidaadda ee todobaadkan waxa aan ku lafa gureynaa khilaafka sii laba lixaadsanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo.
Haatanna ku soo dhawaada Barnaamijkii Faaqidaadda todobaadka oo aan ku lafa gureyno; Marxaladda kala guurka ah ee ay mareyso siyaasadda Soomaaliya
Waxaad ku soo dhawaataan Barnaamijkii Faaqidaadda todobaadka oo aan ku lafa gureyno hanaanka doorashada soo socota ee Somaliya, tabashada mucaaradka iyo kalsoonida lagu qabi karo inay waqtigeeda ku dhacdo.
Barnaamijka Faaqidaadd ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan falanqey ku saabsan doorashada dhawaan la filayo inay ka dhacdo Somalia, waxaana soo jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed
Faaqidaadda: Doodda ka Dhalatay Doorashada Somalia
Ku soo dhawaada Barnaamijkii Faaqidaadda todobaadka oo aan ku lafa gureyno hanaanka doorashada soo socota ee Somaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo. Barnaamijka waxaa Magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Wariyeheenna Xassan Kaafi Cabdiraxman Qoyste
Barnaamijkii Faqidaadda ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa doorashada dhawaan la filayo inay ka qabsoonto Somalia, waxaana magalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay siyaasadda maamulka HIrshabeelle, waxaana magaalada Beledweyne ku sii diyaariye wariyaha VOAda Xuseen Xasan Dhaqane
Faaqidaadda: Khilaafka Somaliland iyo Hay'adaha QM
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaakani waxa uu ku saabsan yahay khilaafka ka dhex taagan hay’adaha Qaramada Midoobay iyo maamulka Somaliland. Barnaamijka waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay Khadar Maxamed Cakulle.
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaakani waxa uu ku saabsan yahay kaalinta dalalka Carabta ee doorashada Somalia oo dadka siyaasadda falanqeeyaa sheegaan in mar-marka qaarkood ay saameyn taban ku leedahay